Sidee Si Guul Ah Ugu Soo Celino Mawduucyada | Martech Zone
Waxaa laygu casuumay wada hadal ku saabsan Blab.im dhowr toddobaad ka hor taasi waxay ahayd wada hadal wanaagsan soocelinta waxyaabaha. Waxaan aragnaa shirkado badan oo sii wadaya inay la halgamaan soo saarista waxyaabaha - iyo soo celinta waxyaabaha kaliya maahan hab caajis ah oo dib loogula wadaago waxyaabaha, waa hab fiican oo lagu wanaajiyo istiraatiijiyaddaada waxyaabaha.
Wixii Martech ah, waxaan uqornaa inta udhaxeysa 5 iyo 15 maqaal usbuucii. Qaar badan oo kuwaa ka mid ah ayaa ka kooban maadooyin aan ku darno midab iyo sharaxaad, sidoo kale. Boostadani waa tusaale weyn - mawduuca Sidee Loogu Celiyaa Mawduuca waa mid aan ula jeeday inaan wax ka qoro, laakiin kan infographic oo ay soo saareen ExpressWriters igu dhiirrigeliyey inaan dhammaystiro boostada oo aan bixiyo talooyinkayga.
Waxaan dib ugu soo celineynaa seddex xeeladood oo kala duwan:
Soo Nooleynta Mawduuca - Waxaan inta badan ogaannaa in gabow, taariikh, maqaalku uu sii wado inuu fiiro gaar ah u yeesho baloogga sidaa darteed aan u baxno oo aan baarno mowduuca oo dhan, cusbooneysiino sawirrada, isku dayno inaan fiidyow helno, oo aan dib ugu daabacno maqaalka cinwaanka isku midka ah ee cusub . Sababtoo ah qodobka horeyba wuxuu u lahaa awoodda raadinta, waxay u egtahay in uu si fiican uga sii fiicnaado matoorada raadinta. Iyo maxaa yeelay maqaalka waxaa lala wadaagay farabadan, tilmaamayaasha saamiga ee badhannadayagu waxay wadaan wadaag badan. Ha u ogolaan waxyaabaha waaweyn inay dhintaan!
Dhex dhexaad - Sawir-gacmeedkani wuxuu wax badan uga hadlayaa fursadda lagu soo bandhigi karo isla mowduuc dhexdhexaadiyeyaasha oo dhan. Waxaan tan sameeynaa sidoo kale, kawada hadalno qoraaladayada ku saabsan suuqgeynta suuqgeynta iyo sameynta fiidiyowyada suuqgeynta. Waxaan sidoo kale si wada jir ah ugu isticmaalnaa iyaga waraaqaha cad, buugaagta elektarooniga ah iyo faahfaahinta waqti ka waqti.
Inaka - Waxaan la sameynay istiraatiijiyad guuleysata macaamiisheenna si aan uga caawino iyaga inay dhisaan maamul leh nuxur, oo aan kaliya soo saarin qulqulka aan dhammaadka lahayn. Mawduucaasi wuu kacay oo waxaa nalaga codsaday inaan ku soo bandhigno, oo aan ku qoro warqad cad, oo aan u qoto dheerno baaritaanka mawduuca. Mararka qaar waxaad qortaa maqaal weyn jawaabtuna waa "meh". Laakiin waqtiyo kale waxaad qortaa maqaal oo wuu baxayaa! Qaado fursad aad si qoto dheer ugu dhex gasho maqaalladaas caanka ah - waxaad dib ugu celin kartaa iyaga oo ah sawir-gacmeedyo, waraaqo cad, websaydhyo iyo bandhigyo.
Infograafiga la wadaago oo la daawado, celcelis ahaan, 30 jeer ka weyn barta boostada - markaa waad arki kartaa sida ka-qaadashada maqaalkaaga iyo abuurista muuqaal ka mid ah ay ugu sii wadi karto fiiro gaar ah mawduuca. Qorayaasha qorayaasha ah waxay kugula talinayaan inaad maqaalladaada u rogto bandhigyo, hageyaal, waxyaabaha weligood cagaaran, infographics, Podcasts iyo videos.
Tags: wax soo saarkacilmi baaristadhexdhexaad iskutallaabqorayaasha qorayaashasida loosida dib loogu soo celiyo waxyaabahainfographicdib u soo celi mawduucasoo nooleynta waxyaabaha